မှိုရတဲ့ မျက်နှာ :)
ကိုစေးထူးရဲ့ "နားကျယ်ကောင်လေး စီးရီး "ကိုအမြဲဖတ်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ သရုပ်ဖော် အရေးအသားကိုလဲ နှစ်သက်မိပါတယ်။
Apr 2, 2008, 10:56:00 PM
ကျွန်တော်တို့ အညာမှာ နာမည်ကြီးမှိုကတော့ မှိုအုန်းနက် လို့ခေါ်တဲ့ ထိပ်မှာ အနက်ရောင်လေး ပါတဲ့မှိုပါပဲ။ ချက်ပြီးစားလိုက်ရင် ချိုပြီး ဆီးဖြူသီးငရုတ်သီထောင်းနဲ့များ တွဲစားလိုက်ရင် အင်မတန်အရသာရှိတဲ့ ဟင်းပါပဲ။ မစားရတာတောင် ဆယ်စုနှစ်တခု ကျော်နေပြီ။
Apr 3, 2008, 12:29:00 AM
နဂျယ်ကောင်လေးနဲ့ မတွေ့ရတာတောင်ကြာပြီ။ ကိုစေးထူးရေ...မှိုဆို တောင်ပို့မှိုနဲ့ ကောက်ရိုးမှိူပဲသိတာ...တခြားမှိူမျိုးတွေမှတ်သားသွားပါတယ်။ ကိုစေးထူးအရေးကောင်းလွန်းလို့ မှိူဟင်းချိုလေးချက်ချင်းသောက်ချင်သွာတယ်။ မှိူတော့နုတ်လို့မရဘူးး။ သံဗှူးထဲကကောက်ရိုးမှိူနဲ့ မြေကြီးနဲ့မစိုက်တဲ့ ကန်စွန်းရွက်နဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ချက်ဦးမှ။
Apr 3, 2008, 4:41:00 AM
အနော်က ဖက်ဆွတ်မှိုတော့ သိဘူး ကောက်ရိုးမှိုတေ့ာ အစ်ကိုတစ်ယောက်နဲ့ ညီမ ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်က အိမ်ခြံထဲမှာစိုက်လို့ မှိုစိုက်နည်းကောင်းကောင်းသိတယ် မှိုထွက်တိုင်းလဲ 10ရက်လောက် မနားတမ်း စားတယ်။ အစားကောင်းလို့တော့ နှာခေါင်းမှာ အဖုကြီးထွက်ဖူးတယ် ဟိဟိ
ကိုကြီးစေးထူးပို့စ်ကတော့ သရုပ်ဖေါ်က မျက်စိထဲကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်တယ် ဖတ်လို့ကောင်းတယ်
မှိုရတဲ့ မျက်နှာလေးတွေကိုလဲ မြင်ယောင်မိတယ်ဗျာ
Apr 3, 2008, 11:43:00 PM
ဖက်ဆွတ်မှိုကို စားချင်သေးတယ်။ မှိုဆို အကုန်ကြိုက်တယ်။ :P
ခုမြတ်နိုး ကန်စွန်းရွက်စိုက်တော့မယ်။ ရရင် ဒီမှာ မှိူလာနုတ်မယ်နော်။
အရမ်းကြိုက်တာပဲ။ ဒီလို သရုပ်ဖော် ၀တ္တုတွေ။
Apr 4, 2008, 4:55:00 PM
မြန်မာပြည်မှာတော့ မှိုစားရင်တောက် တယ်၊ကန်စွန်းရွက်နဲ့ အဆိပ်ပြေအောင် တွဲစားကြတယ်။ အိမ်က ဂရိမက တော့ဗျား မှိုကို ရေလောင်းချပြီး ပါးစပ်ထဲ ပစ်ထဲ့လိုက်သဗျ။ မှိုမှာကပ် နေတဲ့ သလဲတောင် စင်အောင်မဆေး ဘူး။ သူ့ အစား ပါးစပ်ဂျလိဂျလိ ဖြစ်ပါရဲ့ ။ မှိုစားချင်လာပြီ။ အအေးပိုင်းနိုင်ငံ တွေမှာတော့ မှိုကို ဗူးနဲ့ အကျအန ထုပ်ရောင်းတော့ မှိုအစုံမြင်ရတယ် ရွာက မှိုလောက်မချိုဘူး။ အမေ ချက်တဲ့ မှိုဆိုတာဘဲ သိတယ် အဟတ် မှိုနံမည်တောင် မသိဘူး။ ..စာဖတ်ပြီး သွားရည်ကျလာပြီ ဒီကမှိုတွေက သိပ်မချိုသလိုဘဲ ကန်စွန်းရွက်လဲ မရှိဘူး. တောက်ရင်လဲ တောက်ပေ့စေတော့
Apr 5, 2008, 3:50:00 PM
Apr 7, 2008, 1:45:00 AM
nice artile. I like and always read ur artile.
Apr 7, 2008, 1:47:00 AM
အစ်ကို အရေးအသားတွေ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ..စာရေးစရာလုပ်စားပါလား..ဗဟုသုတလည်းရတယ်.. ကျေးဇူးပဲအစ်ကိုရေ :)
There is Burmese saying, you are happier when you found mushroom than when you get gold.
Oh...I miss those day....very first time when I found mushroom.
Apr 27, 2008, 8:52:00 PM